Redmi Rịba ama 8 Pro emeela ka ọ pụta ìhè na igwefoto quad n'azụ | Gam akporosis
Redmi Rịba ama 8 Pro emeela ngosi na igwefoto quad n'azụ
O yiri ka Xiaomi agaghị echere maka otu afọ gara aga iji malite onye nọchiri ya Ihe ngosi RedN 7 Pro, nke bụ, n'ezie, ihe Ihe ngosi RedN 8 Pro. A na-atụ anya nke a n'ihi na etiti ọhụụ ọhụrụ nọ na-agba ọsọ na izu ndị na-adịbeghị anya.
Ugbu a ọ bụ site na leaked foto na, o doro anya na, e jidere na ndekọ na teepu nke ike. N'ime ya ama ama gosipụtara, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ozuzu ya. Naanị n'azụ azụ ka egosiri, ọ dịla n'aka onye na-eji nwata eme ihe. Mana iji kwalite nkọwa ... lelee foto dị n'okpuru wee hụ n'onwe gị atụmatụ ya, yana igwefoto azụ anọ ejiri gosipụta ngwaọrụ ahụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto dị n'okpuru, ebubo Redmi Rịba ama 8 Pro nwere sistemụ igwefoto azụ nwere ihe mmetụta anọ. Ndị a dị na etiti etiti mkpuchi azụ ma kwụ ọtọ na ụlọ, nke nwere isi mmalite na-ejedebe site na eriri ọcha okirikiri. N'akụkụ aka nri ya, n'akụkụ ya, enwere ọkụ ọkụ, nke na-agaghị adị mfe, kama ọ bụ okpukpu abụọ.
Redmi Rịba 8 Pro leaked
I nwekwara ike igosipụta ederede n'okpuru ntọala foto. Agbanyeghị, ihe akọwapụtara ebe ahụ enweghị nghọta, ebe ọ bụ na ọ dị nzuzu. Ihe onyonyo a enyeghi mbughari ma nyochaa ihe ọ na-ekwu. N'aka nke ya, n'agbanyeghị na ederekwa akara Redmi na mkpuchi azụ, anaghị ahụ ya nke ọma.
CEOfọdụ n'ime atụmatụ nke Redmi Rịba 8 ama egosiwo site n'aka CEO nke ụlọ ọrụ ahụ
Ihe aesthetics nke Redmi Rịba ama 8 Pro dịtụ ka nke Redmi K20. Ọ ga-ahụ ka ihu nke ama ama a na-ekwughị ọkwa ga-adị. Na Ọgọstụ 29 anyị ga-ekpughere ya, nke bụ ụbọchị a mara ọkwa na nke a usoro ohuru nke smartphones ga-oru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Rịba ama 8 Pro emeela ngosi na igwefoto quad n'azụ
Smartphonedị smartphone ekwentị Huawei asatọ natara EMUI 9.1 na GPU Turbo 3.0 na faịlụ EROFS